eNasha.com - चोरलाई चौतारो !
चोरलाई चौतारो !
चोरलाई चौतारो साधुलाई सूली यो उखान तपाइँहरुमध्ये धेरैजसोले त सुन्नु भएकै होला । जसको अर्थ हुन्छ, चोरलाई सम्मान गर्ने अनि साधुलाई चाहिँ अपराधी घोषित गरेर गाउँ निकाला गर्ने वा त्यसलाई सजाय दिने ।
अमेरिकाको एउटा बैँकको पैसा लुट्ने एक व्यक्तिलाई त्यही बैँकले जागीर दिने प्रस्ताव राखेको छ । अचम्ममा पर्नु भयो ? उसो भए तल पनि पढ्नुस् !
घटना विवरणअनुसार एक जना बेरोजगार बूढाले अरु कहीँ होइन, चोर्नका लागि बैँक नै ताकेछन् । तिनले बैँकले बनाइदिएको एटीएम मेसिन छेउ गएर त्यसलाई फोडफाड पारेर त्यहाँ भएको ४ हजार ९ सय डलर (३ लाख ३ हजार ८ सय रुपियाँ) रकम लिएर टाप कसेछन् ।
६१ वर्षीय लरेन्स लसनलाई पछि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतसामू हाजीर गराए । उनलाई अकल्याण्डस्थित जेलमा केही समय पनि बिताए । गएको जुलाईमा उनी पक्राउ परेका थिए र एक वर्षन्दा कम समयमा हालै रिहा भएका थिए । ला सेली बैंकको डेट्रोइट छेउको मेसिन उनले भत्काएका थिए । तर उनले भएको कुरा लुकाएनन् । एपी समाचार संस्थाका अनुसार उनले भएको सही सत्य कुरा बताए । उनी रिहा भएपछि भने- "वास्तवमा यो ज्यादै घटिया काम हो तर पनि कम मिहिनेतमा म आफ्नो खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न चाहन्थेँ ।"
उनी रिहा भएको खबर थाहा पाएपछि सोही बैंकले उनलाई जागीरको प्रस्ताव राखेको छ । "म बिना कुनै संर्घष्ा वा कुटपिट बिना जेल जान चाहन्थेँ, जहाँ मलाई नियमित खाना खुवाउने मेसो बस्थ्यो । अब बाहिर निस्किँदा मेरो मनमा ठूलो संकट थियो कि अब के गर्ने होला - तर यो जागीरको प्रस्तावले म हषिर्त छु," बूढा लरेन्सले बताए ।
"मैले जे गरेँ, त्यसमा मलाई पछुतो छ र जसजसलाई मैले चोट पुर्‍याएँ, तिनबाट क्षमाको आशा गर्छु", निन्याउरो अनुहार पार्दै उनले माफी मागे ।
त्यसो त उनी गाडी (अटोमोबाइल) का डिजाइनर थिए । त्यहाँको जागीरबाट निकालिएपछि भोकभोकै सडकमा हिँड्नुभन्दा जेल जानु श्रेयस्कर ठानेका थिए । जेलमा पुर्‍याइनुअघि अदालतमा नै अदालतका सरकारी वकिलले उनको दयनीय स्थितिमाथि दुःखित हुँदै उनको जेलम्याद सकिएपछि उनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने माग समेत राखेका थिए ।
बैंकले उनलाई कस्तो किसिमको जागीरका लागि बोलाएको हो, त्यो चाहिँ बैंकले खुलाउन चाहेन ।
परिस्थिति यस्तो पनि ! मुद्दा मामिला माया सुन्दरी सेलेब्रिटी बलिउड गुगल मूर्ख्याइँ भव्यता विज्ञापन नग्नता उपाय इन्टरनेट फट्याइँ श्रीमानश्रीमती उदेकलाग्दो कीर्तिमान हलिउड प्रविधि